सुरज दँगाल, Author at काव्यालय
by सुरज दँगाल September 5, 2020
तीन-चार महिनाको एकान्तबासको पट्ट्यारिँदा दिनहरूले मनमा स्थिर बनाइदिएको उत्कण्ठाहरुलाई फेरि चलायमान बनाउने हेतुले सोमबार बिहानै पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने मनसायले घरबाट निक्लन्छु । घर के भन्नु, डेराबाट । पातलो हुस्सु र सिरसिर जुम्रे पानीले घामलाई त छोपेकै थियो, त्यसमाथिबा’टोको हिलो लिएर मोटरसाइकल र गाडी मिलेर होली खेलिरहेझैं लाग्थ्यो । १५ मिनेटको पैदलयात्रा गरेर बा’गेश्वरी आइपुग्छु । लकडाउनको प्रभाव ज्यादै न्यून भएकाले सडकमा ट्राफिक साबिकझैं लाग्छन् । बा’टो काट्दै गर्दा हिलोको कारण फड्कनु पर्ने अवस्था आउँछ, हुत्तिएर फड्कँदा चिप्लिएर म एकजना वृद्धसँग ठोक्किन पुग्छु ,“बा’ माफ पाऊँ” भन्छु बुढा आँखा तरेर च्याठिन्छन् ।
पछुताउँदै म चिया पसलतिर लाग्छु । म बसिसक्दा अघिकाबा” पनि भित्र पसिसके । मेरो ठिक दस हात अगाडिको कुर्सीमा आएर बसे । म आफ्नै सुरमा चिया पिउन थालेँ । चिया सकिनै लाग्दा मेरो मानसपटलमाबा”को अनुहार घुम्छ, मेरा आँखा उनको अनुहारमा टक्क अडिन्छन् ।बा”को च्याठिलो प्रतिक्रियाले एकैछिन अघिसम्म वितृष्णा जागेको थियो । तर यसपटक त्यस्तो लागेन । हेर्दा हेर्दै मलाईबा’’को अनुहार चिरपरिचित लाग्न थाल्यो । मैले यो अनुहार कतै त देखेको हुनुपर्छ । के यो अनुहार मेरो जीवनबाट गुज्रेको हो ? देखे देखे, चिने चिनेजस्तो लाग्ने । टिभीमा देख्या हो कि ? कतै त पक्का देखेको हो । मेरो विस्मृतिमा गएर बसेको अनुहार हो यो । सम्झिने लाख कोसिस गरेँ तर सकिनँ ।
मन भित्रको कौतुहलको आँखालाई त निमेष पार्नै पर्यो । एक कदम अगाडि बढेर “बा’ नमस्कार” भनेँ ।बा”को अघिको आवेग शान्त भइसकेको थियो । सायद बुढाले अघि मेरो अनुहार पढ्न भ्याएनन् । “नमस्ते बाबु, चिन्न सकिएन नि ।” आँखा तन्काएर मेरो अनुहार पढ्दैबा”ले भने । “मैले पनि चिन्न सकिनँबा”, तर तपाईंलाई कतै देख्या छु जस्तो लाग्यो । मनले मानेन अनि एकैछिन गफ गरौँ भनेर ।” आफूप्रतिको मेरो उत्सुकता देखेरबा” मख्ख पर्छन् । “घर कहाँ होबाबुको ?” यो प्रश्नले म एकोहोरिन्छु ।
“मेरो पुरानो घर रामेछाप जिल्ला बेताली गाबिस वडा न ४ हो तर २५ वर्षदेखि यतै बस्छु ..” भन्दाभन्दैबा” बोल्न खोज्छन् उत्सुक र खुसीको मुद्रामा “कसको छोरो हौ तिमी ?” यो प्रश्नले म विमूढ हुन्छु, मेरो दिमाग अतितका एकएक पानाहरू पल्टाउन थाल्छन्,कतै यी बुढा मेरै गाउँका त परेनन् ? बुढाको उत्तर नदिँदै “बा’को घर चाहिँ कता नि?” भनेर सोध्छु, बुढा अकमक्क परेर मलाई एकटकले हेर्दै फिस्स हाँसेर भन्छन् “बेताली-४” ।
गाउँको मेलापातमा, उकाली ओराली गर्दा ठट्टा गर्दै हिँडेका तरुना तरुनी,बा’ख्रा र भेडा गोठाला लाग्दैबा’ँसुरी बजाएर कृष्णको नक्कल गर्दै उफ्रिरहेका केटाकेटी, घाँस स्याउला ओसार्दै आफ्ना बच्चाबच्चीको उज्वल भविष्यको कल्पना गर्दै आशावादी भएर हिँडिरहेकाबा”, आमा, घाँगरुको तिखो काँडा मठुरेर, तेल लगाएर चिल्लो पारेको लठ्ठी टेकेर चौतारीमुनि जीवनका भोगाइ र अनुभवको समिक्षा गर्दै गफिँदै गरेका बुढाहरू ।
स्मृतिमा भौतारिरहेको म त्यही चौतारीमा गएर टक्क अडिन्छु जहाँ आधा शताब्दी भर्खरभर्खर टेक्दै गरेको भएपनिबा’उका उमेरका बुढाहरूबिच च्याठिलो गफ गर्दै, निधारमा चन्दनको लामो टिको, दौरासुरुवालमाथि जरिकोट, कालो भादगाउँले टोपी लगाएर सिरुपाते जुँगालाई ताउ दिँदै गाउँका मुद्दा मामिला, घरझगडादेखि लिएर आउँदो चुनावमा कसको सम्भावना कति ? भनेर अम्बरबहादुर कार्की गफ गरिरहेका हुन्थे ।
पञ्चायतताका २ कार्यकाल वडा अध्यक्ष भइसकेका अम्बरबहादुर मेरो बुवाको घनिष्ठ मित्रहरूमध्य एक हुनुन्थ्यो । बलराम, नन्दबहादुर, सारौटे र मेरो बुवा भएपछि गाउँ नै उनीहरूको पक्षमा लाग्थ्यो । सारा गाउँको अदालत अम्बरबहादुरको आँगन थियो । जहाँ मेरो बुवा र अम्बरबहादुरको इजलासमा न्याय सम्पादन हुन्थ्यो । यस्तो प्रगाढ र घनिष्ठ मित्रताको किस्सा ४ गाउँ फैलिएको थियो, मिल्ती होस त “डम्बरे र अम्बरेको जस्तो ।” मित्रताको उदाहरण दिँदा प्रायजसो यिनै शब्दको प्रयोग हुन्थ्यो गाउँमा । बलराम र सारौटेसँग पनि उत्तिकै घनिष्ठता थियो । ‘डम्बर र अम्बर’, ‘सारौ र बले’ ; गाउँले यिनको दोस्तीलाई यसरी दुई भागमा बाँडेर बुझेको थियो । म भर्खरै ८ औं वसन्त टेक्दै थिएँ । अम्बर काकाको पनि एउटा छोरा र म पनि एक्लो सन्तान थिएँ । तर ऊ मभन्दा २ वर्ष दाइ थियो । जसरी बाउ-बाउको मित्रता थियो त्यसैगरी मेरी आमा र रुपमती काकीको (अम्बरकाकाकी जहान) पनि !
मेरा आँखा टिलपिल देखेर बुढालाई माया लागेछ क्यार !
बुढाको प्रश्नलाई फेरि लतार्न मेरो नैतिकताले दिएन । पच्चिस वर्ष अघिको अतित मेरो अगाडि प्रश्नवाचक चिह्न लिएर मलाई सोधिरहेको थियो । बुढाको एकोहोरो अनुरोधका अगाडि मेरा सङ्कल्पका पर्खालहरू हल्लिन्छन् तर भत्किहालेका छैनन् । इतिहासको कालखण्डमा जमेर बसेको पोखरीकोबा’ँध मनले भत्काइदिन्छ । बा’ढी गलासम्म आउँछ । तर चियापसलको माहोल भट्टीको जस्तो नहोस् भनेर छेउमै रहेको जग उठाएर कलकल पानी पिउँछु । अनि बगलीबाट रुमाल झिकेर आँखा सफा गर्छु । बुढाले पत्तो पाउँदैनन् । मेरो लामो मौनताले बुढा अचम्मित हुन्छन् । गोलो मोटो पावरवाला चस्मा नाकको डाँडीमा ल्याएर मलाई नियाल्न थाल्छन् तर मेरो अनुहार मावली पट्टी गएकाले मलाई चिन्न सक्दैनन् ।
“म यसो…बाथरुम गएर आउँछु है बा’ ” किङ्कर्तव्यविमूढ भावमा बा’लाई नै थाहा नभई बा’को मुन्टो हल्लिन्छ । म बा’थरुम गएर मुख धुन्छु । एकैछिन ऐनामा आफूलाई नियाल्छु । आफ्नो अस्तित्वलाई विगत र वर्तमानको तराजुमा राखेर जोख्छु, मलाई विगत नै भारी लाग्छ । गाउँघरमा उखान छ ‘सुख बाँडे दोब्बर, दुःख बाँडे आधा’ ! यही उखानको सार्थकतालाई व्यवहारिकतामा उतार्ने सङ्कल्पकासाथ म बाहिर आउँछु । फेरि दुईकप चिया अर्डर गरेर बा’ भएको ठाउँमा आउँछु । तर त्यहाँ बा’ हुँदैनन् । म तिर्मिराउँछु ।
जिन्दगीमा पहिलो पल्ट आफ्नो जरै देखिका भोगाइहरू पोख्न खोज्दै थिएँ तर अचानक बा’ गायब भइदिए । कतै म सपनामा त छैन ? होइन होइन,अघिको टेबलमा दुईवटै गिलास छन्, चियाको पैसा दिँदापनि पसलेले नसोधी २वटै चियाको कटायो यो बिपनै हो । तर बा’ कहाँ गए त ?
मेरो मनले १२० को स्पिडमा कुदिरहेको गाडीमा अचानक इमर्जेन्सी ब्रेक लाग्याजस्तो अनुभूत गर्छ । घायल मन लिएर पशुपति पनि जान मन लाग्दैन । म घरतिरै फर्किन्छु ।
मेरो दैनिकी बदलियो । म दिनदिनै पशुपतिको वरिपरि भौतारिन थालेँ । दिनको दुईपटक त्यही चियापसलमा जान्थेँ । तर बा’लाई भेटिएन अबदेखि यता नआउने सङ्कल्पकासाथ म निराश भएर गोरखनाथको मन्दिर ठिक अगाडिपट्टी हिँड्न थाल्छु । फेरि त्यहाँपनि पछाडिबाट हेर्दा तिनै बा’जस्तै मान्छे देख्छु । न बा’ नै पनि हुन् कि ? तर हारेको मनस्थिति बोकेर हिँडेको मलाई बोलाइहाल्ने आँट आउँदैन । सरासर हिँड्छु, मेरा फूर्तिला पाइलाले ती बुढालाई जितेर अघि बढ्छन् । “ए, बाबु !” म झसङ्ग हुन्छु । यी त तिनै बा’ नै पो रहेछन् । मेरो मुख खुसीले चम्किन्छ ।
“बा’..कता हराउनु भको यत्रो दिन?” त्यसदिन किन बिचमै छोडेर किन हिँड्नुभएको भन्न चाहिँ मलाई उचित लाग्दैन । “तिम्रा कुरा सुन्दासुन्दै मलाई कतै तिमीले बेकुप त पारिराखेका छैनौ जस्तो लाग्छ । उत्तिकै त जिन्दगीबाटै ठगिएको मान्छे” यत्ति भन्दाभन्दै बा’ भावुक हुन्छन् । म कहाँ बस्ने भनेर ठाउँ खोजिरहेको हुन्छु ।
“तल गौरीघाटको चिया पसलमा गएर गफ गरौँ न है बा’ ।” बा’ ले ‘हुन्छ’ को मुन्टो हल्लाउँछन् तर अघिको आफ्नै कुराले बा’ बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
चिया पसलमा भित्र छिर्दै गर्दा ढोकैमा डा.अरुण कार्कीलाई भेट्छु । डा. अरुण सङ्ग मेरो राम्रै चिनजान थियो । मिजासिला स्वभावका डा.अरुण यतै कतै क्लिनिक चलाउँथे तर अहिलेसम्म त कुनै ठूलै प्राइभेट हस्पिटलका डाक्टर भइसकेका छन् । भेट नभएको धेरै भएको थियो, प्रगतिका लागि उनलाई बधाई दिन्छु । मुस्कुराएर ऊ बाहिर निस्किन्छन् । म गफमा अलमलिँदै गर्दा बा’ ठाउँ पहिल्याएर बसी सक्छन् । चिया आउँछ । चिया पिउँदै बा’ले अस्तिको मेरो अधुरो परिचय पूरा गर्न भन्छन् । मलाई कुण्ठित महसुस हुन्छ तैपनि अफ्ठ्यारो मानी मानीकन पनि भन्छु, “म तपाईंको साथी डम्बर बहादुरको छोरा” । बा’को मुखाकृतिमा अचानक भयङ्कर बदलाव आएको म देख्छु । बा’को अनुहार पहेंलो हुन्छ ।
मेरो घाँटीमै पनि आवाज किक्लिक्क हुन्छ, आवाज शून्य भएर म बोल्नै सक्दिनँ । बा’ले फेरि उही कुरा सोधे । सम्हालिन कोसिस गर्दै भन्न थालेँ, “जब तपाईं र बा’ ४/५ दिनका लागि भनेर मन्थली जानु भयो,त्यही दिन बेलुका बलराम काका हाम्रो घरमा आए, खाना खुवाएर आमाले मलाई सुताउनु भयो, निधारमा म्वाइ खाँदै बाहिर गएर आउँछु भनेर झोलामा कपडा र गहना पोको पारेर बलराम अङ्कललाई बोक्न दिनु भो । म अबोध बालकलाई के थाहा । भोलिपल्ट बिहान एकैचोटी ब्युझिएँ ‘आमा… आमा…’ भनेर बिहानैभरि गाउँभरि खोजेँ, तर भेटिनँ आमालाई । कुनै कामले कतै जानुभएको होला भनेर कुरेर बसेँ । १२ बजेसम्म पनि न आएपछि बेलुका घर आएँ । ढोका बन्दै थियो । आमा कतै थिइनन् । बा’ पनि घरमा नहुँदा मलाई एकदम डर लाग्यो । रातभरि ननिदाई बिहान भयो । ८ वर्षको बालकलाई के थाहा ।
आमा नभएको घर बिरानो लागेछ क्यारे, म बेतोडले भागेछु त्यो शून्य घर छोडेर । आमाले च्याट्ट माया मारिछोडेको मैले, बा’को पनि च्याट्टै माया मारेछु ।”
अम्बर बा धुरुधुरु रुँदै भन्न थाले “तिम्रो बा’ले तिमीलाई धेरै खोजे । २/३ महिनै खोजे तर कतै भेटेनन् । तिम्री आमापनि पोइला गएकै हो भन्ने पक्का भएपछि बा’ लोलाए । तिमीलाई पनि कतै नभेटेपछि डम्बरे पखेटा भाँचिएको परेवा जस्तो भयो; घायल ! सामाजिक गतिविधिमा पनि निस्कृय भयो । कतै जादैनथ्यो, घरमै मात्र बस्थ्यो । हिँड सँगै बसौँ दाजुभाइ भनेर मैले लाख बिन्ती गर्दापनि मानेन । खाँदै नखाई सुकेर लठ्ठी भइसकेको थियो । ६ महिना बित्दा नबित्दै चिन्तामै डुबेर परलोक भयो ।”
एकै छिनको मौनतालाई चिर्दै म सोध्छु “अनि बा’ अहिले यतै हो र हजुरको बसाइँ ? गाउँ छोड्नु भयो ?” बा’ भन्न थाल्छन् ”डम्बरे बितेपछि मलाई गाउँमा एकरती मन लागेन । गाउँको सिरुखुरी बेचेर मन्थली आएर एउटा सानोतिनो घर किनेर बस्न थालेँ । छोरोको पढाइ राम्रै थियो । स्कुलमा सधैँ प्रथम हुन्थ्यो ।
चौतारीतिर गफगाफ गर्ने बेला मेरो इज्जतै भिन्नै हुन्थ्यो । छोराले जिल्ला टप गर्यो । मलाई मन्थलीमै राखेर पढाउन मन लागेन । काठमाडौँमा डेरा लिएर उसलाई यतै राख्दिएँ । बेला बेलामा चिठी पठाइरहन्थ्यो । खर्च लिएर म भेट्न आउथेँ कहिलेकाहीँँ । गाउँमा दुःखै थियो । तैपनि जसोतसो गरेर उसलाई राम्रै कलेज भर्ना गरेको थिएँ । एकदिन दिउँसो करिब १ बजेतिर हुलाकीले चिठी ल्यायो । पल्टाएर हेर्दा छोराले कक्षा १२ मा पनि राम्रै अङ्क ल्याएर उतिर्ण भएछ । खुसीले मेरो भुइँमा खुट्टा थिएन । उसलाई डाक्टर बन्ने मन रै’छ । खर्चले नपुग्ने भएपछि किनारको खेत बेच्दिएँ । अलिअलि ऋण पनि गरेँ । अनि एउटा भएको छोरो राम्रै पढोस् त भनेर उसलाई पढ्न इन्डिया पठाएँ । केही वर्षपछि छोरो डाक्टर बनेर फर्कियो । गाउँभरि अब मलाई डाक्टर बा’ भनेर चिन्न थाले ।
ऊ यतै काठमाडौँमै आएर गतिलै काम गर्न थाल्यो केही समयपछि घर र गाडी पनि किन्यो । घरमा नोकरचाकर थिए । सुरुसुरुमा जिन्दगी सुखसयलमै बितेको अनुभूत हुन्थ्यो । तर बिस्तारै छोराको व्यस्तताको कारण हामीलाई समय दिन पाउन छोड्यो । उसलाई प्राय कमै भेट्न पाइन्थ्यो । घरको सारा खर्च त उसैले धानेको थियो । तर पनि छोराले मतलब नगरेपछि जिन्दगीमा उदेकलाग्दो तनावले पाइला राख्यो । घर-गाडी, नोकरचाकर, बैंकमा पैसा सबै थियो । मैले कल्पनामा पनि सोच्न नसक्ने सम्पत्ति थियो । बाहिरबाट मान्छेले हेर्दा निकै लोभलाग्दो जिन्दगी थियो । तर जब छोराले मतलब गर्न छाड्यो त्यहीँबाट खुसी खोसिन थाले । एकातिर बेहिसाब सम्पत्ति थियो भने अर्कोतिर खुसीहरू नपत्याउँदो गरी खोसिँदै थिए ।
संसारमा एउटा विश्वास छ सम्पत्ति नै सुख र सम्वृद्धीको प्रतीक हो । तर होइन रहेछ । यो केवल मिथ्या भ्रम रहेछ । सम्पत्ति र सुख सधैँ एकैसाथ नबस्ने रहेछन् ।
त्यसैले अहिले घर छोडेर यतै वृद्धाश्रमतिर आएर बसेको छु । दिनभरि गफ गर्ने साथी हुन्छन् । मलाई यहाँ आत्मिक सुख मिल्छ । अघि तिमीले ढोकामा भेट्या डा.अरुण हैन ?” मेरा आँखा गह्रौँ भइसकेका हुन्छन् । छोटो बोल्छु, ”हो” । अनि बा’ मुस्कुराउँदै भन्छन् “त्यो मेरै छोरो हो ।” यति भनेर बा’ उठ्छन्, मपनि उठ्छु । म चियाको पैसा तिरेर फर्किँदै गर्दा बा’ हिँडिसकेका हुन्छन् । एकैछिन पछ्याउँछु । पछाडि फर्किदै नफर्की हिँडेका बा’ देखेर । मेरो मुखबाट आवाज निस्किन्छ “जिन्दगी !” । ६ बजिसकेको हुन्छ । म डेरातिर फर्किन्छु । बाटो काट्दै गर्दा हिलोको कारण फड्कनु पर्ने अवस्था आउँछ, हुत्तिएर फड्कँदा चिप्लिएर म एकजना वृद्दसँग ठोक्किन पुग्छु, “बा’ माफ पाऊँ” भन्छु बुढा आँखा तरेर च्याठिन्छन् ।
by सुरज दँगाल August 15, 2020
अपराह्नको समय थियो, सेता बादलका टुक्राटुक्रीले सजिएको दुधिलो आकाशको सतहमा रंगीचंगी चराहरू उडिरहेका थिए,…